Weerar ka dhacay Mali - BBC News Somali
Weerar ka dhacay Mali
28 Nofembar 2015
Sadex qof ayaa ku dhimatay weerar loo adeegsaday gantaal oo lagu qaaday saldhig ay leeyihiin ciidammada nabad ilaalinta ee waqoyiga dalka Mali.
Laba ka mid ah ciidammada nabad ilaalinta oo u dhalatay dalka Gini iyo qof shacab ah oo la shaqeynayay ayaa lagu dilay weerarka Kidal sida ay sheegeen saraakiisha.
Sideed maalmood ka hor, ayaa rag hubeysan waxa ay weerareen hotel ku yaal caasimadda Bamako ee dalka Mali, iyada oo lagu afduubtay tobanaan qof, halka sagaal iyo toban kalena ay ku dhinteen.
Ciidammada nabad ilaalinta ee dalka Mali ayaa la ansixiyay sanadkii- 2014-tii kadib markii olole ay horkacayeen milatariga dalka Faransiiska ee dalkaasi joogay looga saaray maleeshiyaad Islaami ah oo kasoo jeeda waqooyiga Mali.
Minusma ayaa waxaa ka mid ah toban kun oo askari kuwaasi oo tobanaan ka mid ah ay kasoo kala jeedaan dalal kala duwan, intooda badan ayaa ka socda dalalka dariska ah ee ku yaal waqooyiga Afrika.
Ciidammada nabad ilaalinta ee QM ayaa lagu dhaliilay sharci ahaantooda dhowr mar sababa la xiriira in aysan jirin waxqabad lagu taageeri karo, waxa ayna inta badan la kulmeen khasaarooyin sanadihii dhawaa, iyada oo laga dilay 56 askari.
Maleeshiyaadka Islaamiga ah ayaa looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen weerakii maanta dhacay, kaasi oo ay ku dhaawacmeen 14 qof, waxaana dhaawacyo halis ah ay ksoo gaareen kuwa kale.
Dalka Mali ayaa sanadkii 2011 maleeshiyaadka Tuwarig waxa ka noqdeen koox falaaga ah, kaddib markii ay kasoo laabteen ciidamo ay ka mid ahaayeen dalka Libya.
Bishi july sanadkii 2014-kii dalka Faransiiska ayaa bilaabay howlgal si ay cagta u mariyaan kooxaha jihaad doonka ah.
Balse weerarada ayaa wali ka soconaya saxaraha waqooyiga Mali, iyada oo lagu eedeynayo kooxaha Islaamiyiinta ah.
Si kastaba, toddobaad ka hor ayay ahayd markii hoteel ku yaal caasimadda Bamako ee bartamaha dalka Mali weerar lagu qaaday.